ကိုးတန္းႏွစ္ကတည္းက ျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္နဲ႔ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တြဲလာတဲ့ ညီေလး ဟိန္းရာဇာကေတာ့ေသရာပါတက္တူးထိုးလိုက္ရွာပီ…. – Real News
ကိုးတန္းႏွစ္ကတည္းက ျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္နဲ႔ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တြဲလာတဲ့ ညီေလး ဟိန္းရာဇာကေတာ့ေသရာပါတက္တူးထိုးလိုက္ရွာပီ….
ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီလေး ဟိန်းရာဇာရေ…။
မင်း သစ္စာတရားဟာ ဒီ၂၁ရာစုမှာ ရှာရခက်သွားပြီကွ။ ငါ ရှက်လိုက်တာ။
၂၁ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ရက်နေ့ ညီမလေးမြသွဲ့သွဲ့ခိုင် (မင်းရဲ့ချစ်သူ) စျာပနကိုလည်း မင်းရောက်လာတယ်။ တွဲလာခဲ့တာ ကြာပြီမို့ ရည်းစားအဖြစ်က ပြတ်စဲတယ်ဆိုတဲ့ ဖြတ်စာကိုလည်း မင်းကိုယ်တိုင် အခေါင်းထဲထိ လာထည့်ခဲ့ရသေးတယ်။
အခုလည်း ချစ်သူ့မျက်နှာကို မင်းနှလုံးသားပေါ် တင်သွားပြန်ပြီလား။ တက်တူးထိုးနေချိန် ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းက နှင်းဝေတဲ့ဆောင်းဆိုပဲ။ မင်းမျက်နှာ ဘာဖြစ်နေလဲ ငါကြည့်မိတယ်။ မင်းရင်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ငါသိပါတယ်ကွာ။ ခေတ်မီကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းရင်လည်း အတိအကျ ထွက်ချင်မှထွက်မယ်။
ငါ့ခံစားမှုက ဘာနဲ့တိုင်းတိုင်း ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ ရေးနိုင်လို့ နောက်မှအကျယ်ရေးပါ့မယ်ကွာ။ အခကြေးငွေမယူဘဲ မေတ္တာနဲ့ထိုးပေးတဲ့ အစ်ကိုကြီးဘစီရဲ့ စေတနာကိုလည်း ငါ့မှာ လေးစားဦးညွတ်လျက်ပါကွာ ။
Dr Sasa မွ ပန္ၾကားခ်က္ …
ဦးေက်ာ္သူ ျပတ္သားၿပီ …..